‘मी टू’ बाट पछी हट्दै अभिनेत्री, डर हो कि कर ? ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
‘मी टू’ बाट पछी हट्दै अभिनेत्री, डर हो कि कर ?
१० मंसिर २०७५, सोमबार २०:४५
मङ्सिर १० – ‘मी टू’अभियानले भारतले ठुलै रुप लियो । यही अभियानको कारण बलिउडका चर्चित हस्तीहरु रातारात बदनाम हुन पुगे । नाना पाटेकर देखी अशोकनाथ सम्मका चर्चित हस्तीहरु माथि यौन हिन्शाको आरोप लाग्यो । आरोपकै नाना पाटेकरले हात परेको फिल्म छोड्नु पर्‍यो भने निर्देशक साजिद खानको हालत पनि त्यस्तै भयो । संगीतकार अनु मल्लिक पनि ‘मी टू’ अभियानमा मुछिए । उनले पनि त्यसको मुल्य चुकाउनु पर्‍यो । अभिनेत्री तनुश्री दत्ताले नाना पाटेकर माथि यौन शोषणको आरोप लगाए पछी ‘मी टू’ ले ठुलो रुप लियो । भारत हुँदै यसले नेपालमा समेत प्रभाव पर्‍यो ।
तर पछील्लो समय आएर ‘मी टू’ सुस्ताउदै गएको छ । एक समय बलियो प्रभाव छोडेको ‘मी टू’ अहिले कमजोर बन्दै गएको छ । आरोप लागे लगत्तै केही बलिउडकर्मीहरुले फिल्म छोड्न परे पनि उनिहरु माथि लागेको आरोप अहिले कमजोर बन्दै गएको छ । यो अभियान यती सम्म कमजोर बनेको छ कि आरोप लगाएकाहरु नै अहिले आरोप फिर्ता लिन लागेका छन् । अभिनेत्री केट शर्माले यसको सुरुवात गरिकी छिन् । केटले चर्चित निर्देशक सुबाश घई माथि यौन शोषणको आरोप लगाएकी थिईन् ।
केटले सुबाश घईले आफुलाई जबरजस्ती किस गर्न खोजेको आरोप लगाएकी थिईन् । तर अब केटले यो मुद्दा फिर्ता लिने भएकी हुन् । केटले मुद्दा अघी नबढाउन मुम्बई प्रहरीलाई आग्रह गरेकी छिन् । आरोपित कसैलाई पनि पक्राउ नगरि ‘मी टू’ लाई मजाक बनाएको भन्दै केटले मुद्दा फिर्ता लिने बताएकी हुन् । तर यही कारणले मुद्दा फिर्ता लिएकी हुन् भन्ने कुरा भने पत्याउन गार्हो हुनेछ । त्यती कारणले नै मुद्दा फिर्ता लिएकी हुन् अथवा अन्य केही कारण पनि छन् त्यो त समयले बताउने नै छ ।यसरी मुद्दा फिर्ता लिदा कतै ठुला हस्ती सँग अभिनेत्रीहरु डराएका त होइनन् भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ । किनकी ‘मी टू’ का आरोपीहरु चर्चित बलिउड हस्तीहरु रहेका छन् ।